PCB Qalabka - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
PCB Waxyaabaha Selection Guide
Qaybta ugu muhiimsan ee korantada waa guddiga circuit daabacan ee (PCB). Sidoo kale, gaabinta ayaa sidoo kale lagu tiriyaa loox daabacay taararka iyo kaararka fiilooyinka daabacay, kaas oo muhiimad ahaan waa wax la mid ah. Maaddaama ay door muhiim ah oo looxyada kuwaas oo wax walba ka kumbiyuutarrada si calculators, PCB wax guddiga doorashada waa in la sameeyo daryeel iyo aqoon waayo baahan korontada waslad la siiyo qalabka.
Ka hor inta horumarinta PCB ah, qalabka guddiga circuit ayaa inta badan daboolay by cirkuna buulal bay of murgiyey, oo silig ka noqnoqashada in si fudud ku guuldareysato kara junctures qaarkood. Waxay sidoo kale laga yaabaa circuit gaaban mar da'da qabtay iyo fiilooyin qaarkood bilaabeen in ay crack. Sida la fili karo, habka buuga in tegey oo wuxuu galay taararka ka mid ah kuwan loox hore ahaa wareer iyo cabbudhinayo.
Sida duwan sii kordhaysa oo ka kooban elektaroonik ah maalin kasta waxay bilaabeen in ay ku tiirsanaadaan loox circuit, tartanka on ahayd si ay u horumariyaan fudud, xal kale oo dheeraad ah ee isafgaradka, tanina waxay keentay in horumarinta wax, PCB ah. Iyada oo qalabka PCB, wareeggeedii la jabin karaa inta u dhaxaysa Koox ka mid ah qaybaha kala duwan. bir ah in uu fududeeyaa kala iibsiga ee haatan u dhexeeya guddiga iyo wax kasta oo qaybaha ku lifaaqan waxaa loo yaqaan Alxan, kaas oo sidoo kale u adeegta ujeedada ah dual leh tayada ay koolo.
PCB Waxyaabaha Curiska
Halabuurka ee PCB guud ahaan ka kooban yahay afar lakab, kuwaas oo kulaylka wada dahaaray galay hal lakab. Qoraalkani wuxuu isticmaalaa in PCB ka mid ah layers socda top si hoose:
kala duwan A jaban oo looxyada sidoo kale ka jira suuqa aan isticmaala qalabka PCB sheegnay isku, laakiin halkii ay ka kooban yihiin phenolics ama epoxies. Sababo la dareen ah kaamerada of loox, kuwaas oo, waxay u muuqdaan in ay lumiyaan dukumiintiyo si fudud. Kuwani loox ka jaban inta badan waa ay fududahay in la aqoonsado by urta waxay ku siin off marka la soldered.
Lakabka labaad ee PCB waa copper, kaas oo la dahaaray gal substrate la isku dar ah ee kulaylka iyo koolo. lakabka copper waa khafiif ah, iyo looxyadiisa qaar ka mid ah waxaa jira laba lakab oo kale - mid ka mid kor ku xusan oo ka mid ah hoos substrate ah. PCBs kaliya lakabka hal copper u muuqdaan in loo isticmaalo qalabka korontada jaban.
The copper ballaaran u-isticmaali laminate qiireysan (CCL) waxaa loo kala qaybin karaa kooxo kala duwan sida uu qabo heerka kala duwan oo ay ku jiraan dirka xoojinta wax, loo isticmaalo koolo dumin kara, ololi, waxqabadka CCL. kala soocidda kooban oo CCL lagu muujiyay Jadwalka soo socda 1.
Kor soldermask cagaaran waa lakabka silkscreen ah, kaas oo ku darayaa warqado iyo tilmaamayaasha tiro ka dhigi PCB ah akhrin karo in barnaamijyo casriga ah. Tani, ka bacdi, waxay kuu sahlaysaa for qalabka elektarooniga assemblers in meel kasta PCB in meesha ugu habboon iyo jihada saxda ah ee qayb kasta. lakabka silkscreen waa sida caadiga ah oo cad, in kastoo midabada sida casaan, huruud ah, cawl iyo madow ayaa sidoo kale mararka qaarkood loo isticmaalo.
Lakabka PCB Terms Technical
Oo ay la socdaan fahamka sida PCB waa israac, waxa kale oo muhiim ah in la ogaado waxa soo socda marka la eego farsamo oo uu weheliyo, isticmaalka PCBs:
• Giraanta Annular. giraanta copper The wareegsan godadkii on PCB ah.
• DRC. gaabinta An xukunka design jeeg. Muhiimad ahaan, DRC waa dhaqan dheehan design ee PCB ah loo hubiyo in ay ka shaqeynayaan. Details calaamadsan oo ka mid ah width oo ka mid ah raad iyo godad qoditaanka.
• hit gaardi. Isticmaalaa in lagu tilmaamo oo dhan godad on PCB ah, haddii ay sax ama khaldan. Xaaladaha qaarkood, god laga yaabaa in wax yar aan sax ahayn ay sabab u tahay qalabka qodista caajis loo isticmaalo inta lagu guda jiro soo saarka.
• faraha. Birta qaawan ay weheliyaan qarkiisa guddiga adeega sida xira dhibcood u dhaxaysa laba PCBs ah. Farahaaga waxaa inta badan lagu arkaa kulan video jir ah iyo kaararka xusuusta.
• gelinno Mouse. Qayb ka mid ah guddiga la kacsan qoday si heer uu ku hanjabo daacadnimada dhismaha ee PCB ah.
• gashto. meel ka mid ah biraha bandhigi on PCB ah, gal oo xabbad soldered waxaa guud ahaan lagu dabakho.
• Panel. A guddiga circuit ballaaran oo ka kooban loox yar, kuwaas oo ugu danbeyn kala isticmaalka shakhsi. Sababta dhaqanka waa in la tirtiro dhib ah in hawsha gacanta ku haya ay la kulmaan marka ay timaado la tacaalida loox yar.
• Stencil nab. Stencil bir A on board a, u gal oo Jinka la dhigayaa waayo, kabida.
• Diyaarad. qaybta A weyn oo ah naxaas bandhigi on PCB ah, kaas oo la calaamadeeyay by xuduudaha laakiin lahayn Jid.
• Slot. dalool kasta oo aan wareeg ah. PCBs la naadi waxaa inta badan sare jaban ay sabab u tahay kharashka wax soo saarka ee abuuraya godad kisi-qaabeeya on board wareeg ah. Naadi caadi ahaan ma plated.
• Dhulka Buur. Habka A ku dheehan yahay qaybaha dibadda si toos ah Jaha guddiga iyada oo aan isticmaalka daloolka.
• Trace. line ka socota oo ah naxaas guud ahaan PCB ah.
• V-score. meel A halkaas oo guddiga ayaa qeyb ahaan laga gooyaa. Tani karnaa PCB ah u nugul xigtay.
• Via. godka A kaas oo muujinaysaa safarka u dhexeeya lakab. Vias waxaa loo arkaa in versions teendhooyin iyo untented. versions teendhooyin lagu daboolay soldermask ilaaliya, halka vias untented waxaa loo isticmaalaa ku lifaaqan isku xira.
Tirada in horreeyaa lakabka ah waxaa loola jeedaa tirada dhabta ah ee qabashada layers, waxa ay noqon isdaba ama diyaarad daaha - labada nooc lakabka. Lakab u muuqdaan in ay leeyihiin tirada 1, ama mid ka mid ah afarta tiro ee soo socda xitaa: 2, 4, 6, 8. loox Lakabka mararka qaarkood waxay leeyihiin tiro kisi ah, balse waa dhif oo si dhib leh ka dhigi lahaa wax kasta oo kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, wax PCB in 5 lakabka ama 6 guddiga daaha ka noqon lahaa shiidaa isku mid ah.
The laba nooc oo daaha shaqooyin kala duwan. layers isdaba ciyaari tareenka. layers Diyaarad adeego sidii Xidhiidhiyayaasha xoog iyo diyaarado copper feature. layers Diyaarad ayaa sidoo kale kasoo muuqan jasiiradaha in loo ogaado ujeedada seylaanyenta, oo loox ah, waxa ay noqon 3.3 V ama 5 V.
FR4 waa magaca code for go'yaal dahaaray epoxy galaas-xoojiyay. Sababtoo ah halka ay xoog, iyo sidoo kale in ay awood u leh inay hor istaagi qoyaan iyo dab, FR4 waa mid ka mid ah qalabka PCB ugu caansan.
Tixgelinnada dheeraad ah PCB Design
tiradaasi A sida 1.6 mm waxaa loo isticmaalaa si ay u muujiyaan dhumucda guddiga lakabka ah. On 4 loox lakabka, 1.6 mm waa cabirka caadiga ah. Dhumucdiisuna waa wax si ay u daawadaan, waayo, marka aad dooranayso loox qalab. Guddiyada la dhumucda weyn, tusaale ahaan, ku bixin doonaan taageero dheeraad ah marka shay xira culus u baahan tahay in la taageero.
Heerka caadiga ah ee dhumucda copper on layers diyaarad waa 35 microns. Sidoo kale, oo dhumucdiisuna waxay copper waxaa mararka qaarkood lagu tilmaamay in grams ama ounces. Waxaa fiican si ay u tagaan, waayo, ka badan oo dhumucdiisuna waxay copper caadi on loox oo taageera badan oo codsiyada.
Tracks aan loogu tala galay in lagu wareejiyo awoodda, laakiin tani mararka qaarkood waxay dhici kartaa marka calaamadaha aadan si fiican u xamili mawjadaha. Haddii aan dhibaatada la hayo baaritaan, tareenka laga yaabo inuu badiyay xaddi weyn oo xoog. Si aad u hesho awoodda sida ugu badan ee suurtogalka ah ayaa ka soo dhaqaaqay hal dhinac oo track a kale, khariidad ee track waa in lagu xisaabiyo isleegyo gudbinta.
Guud ahaan, laba inji waa fogaanta track xaq on loox lakabka in ka kooban yihiin wax copper-dabagal PCB FR4, siinta in waqti signalka waa mid ka mid nanosecond. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad sidoo kale tixgeliyaan saamaynta line gudbinta waayo dhererka track sare, gaar ahaan haddii daacadnimada signal waa muhiim. Internet waxaa ka buuxa barnaamijyada iyo barasantigareeyaan in waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka la xisaabiyo impedance sax ah guddiyada lakabka gaar ah.
On loox ugu, vias madhan yihiin, oo aad inta badan ka arki kartaa xaq u dhex. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaalado kala duwan oo hoostiisa vias buuxin kara. Bilow, waxaa lagama maarmaan u ah vias ah in la buuxiyo marka ay timaado la xirrira caqabadaha ilaaliya boodhka iyo nijaasta kale ka. Marka labaad, vias laga yaabaa in la buuxiyaa si kor loogu qaado awoodda ku sidday ee hadda ah, taas oo loo isticmaali karo qalabka kiiska qabashada. Sabab kale in vias buuxsanto waa in heer guddi ah.
Vias caadi ahaan ka buuxsamay Roobka kubada isugu soo gogo '(BGA). Haddii xiriir dhacdaa inta u dhaxaysa pin BGA ah iyo lakabka hoose, Alxan simbiriirixan karaa via iyo gal lakabka kala duwan. Sidaa darteed, vias waxaa ka buuxa si loo hubiyo in Alxan ma daadato lakabka kale, iyo daacadnimada xiriirada lagu hayo sidii loogu talagalay.
Mid ka mid ah dhacdooyinka ka badan dhib on board daaha waa marka biririf xiriirka gudaha iyo dibedda barta qaar ka mid ah ay weheliyaan guddiga. The more tani dhacdo, ka si degdeg ah qayb ka mid ah guddiga waa in uu keena baxay gebi ahaanba. Celceliska user guriga korantada la kulmi doonaan dhibaato marka mid ka mid ah badhamada ku calculator a joojiyo shaqada. button kasta riixay hoos on qayb gaar ah oo guddiga daaha, oo markii rigoore helo khaldan, button in rabid kaalinta aan soo diri kartaa ay signal.
Hab kale oo xiriir la suuxaan karaa in dhibco qaarkood waa marka Afyare a card sare waxaa la dhigay gal motherboard ah. Haddii kaarka waxaa si liidata u maareeyeen, mid ka mid ah baraha ay weheliyaan kaarka ka heli karto dhaawacan oo ay ku guuldareysato inay ka shaqeeyaan waxaa ka soo baxay. Habka ugu fiican si loo ilaaliyo meelaha guddiga in ay xidhiidh la sameeyaan midba midka kale waa iyadoo la isticmaalayo lakabka ah oo dahab ah, oo u adeegta sida ooday nolol-qaadidda. Gold noqon kartaa qaali ah, si kastaba ha ahaatee, iyo adeegsigeeda tabs ku darayaa talaabo kale in geeddi-socodka lagu been abuurtay PCB.
Midabka in dadka intooda badan u yaqaanaan marka ay timaado motherboards waa ku cagaar, midabka ah ee soldermask. In kastoo aan ku dhowaad sida caadiga ah, soldermask sidoo kale mararka qaar u muuqda in midabo kale, sida cas ama buluug ah. Soldermask waxaa sidoo kale loo yaqaan by LPISM gaabinta, taasoo u taagan tahay dareere soldermask imageable photo. Ujeedada soldermask waa in laga hortago baxsiga ee Alxan dareere ah. Sanadihii la soo dhaafay, dhacdooyinka waxa ay noqon badan sabab u la'aanta ah ee soldermask. By xisaabaadka ugu, si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala guud ahaan door bidaan loox in soldermask badan loox oo aan samayn.
Marka soldermask ayaa codsatay in PCB, PCB waa la hoos geliyey wax Alxan la shubay. Sida habka ay taasi dhacdo, meelaha qaawan oo naxaas ah u noqdaan solderized. Tani waa qayb ka dhan ah nidaamka loo yaqaan kulul Nigeria Alxan hawada (HASL). Sida chips smd waxaa soldered, guddiga la kululeeyo si heer Alxan qaadataa foomka la shubay ah iyo qaybaha waxaa lagu shubaa ay meesha saxda ah. Sida jinaya Alxan ah, qaybaha ay sidoo kale noqon soldered. HASL sida caadiga ah waxaa ka mid ah hogaanka mid ka mid ah xeryahooda ee Alxan ah, inkastoo fursado hogaanka-free sidoo kale jiraan.
dheereynta ee width track lagu qorey dumisaan ah. Tusaale ahaan, marka aad aragto tirada 6/6 mils, in sheeg lahaa 6 mils balladhka track ugu yar, iyo sidoo kale kala dheereynta track ugu yar. Sidaa darteed, dhammaan spacings on board ee su'aasha waa in sidoo kale la kulmaan ama ka badan 6 mils. Waayo, kuwa aan la aqoon, unugyada mils waxaa loo isticmaalaa si loo ogaado masaafo on qalabka PCB. Width iyo kala dheereynta waa gaar ahaan muhiim ah marka ay timaado loox in waxaa loogu talagalay in ay la tacaalaan xaddiyo sare oo hadda.
Marka guddiga PCB la multilayered, kuwan raadkaygay kala duwan oo aan la aragga baaro kartaa ay helitaanka. Sidaa darteed, baaritaan la sameeyaa in meelaha probes dhamaadka tareenka si loo xaqiijiyo dhammaan calaamadaha waa Ieexdo. Baaritaanka waxaa la sameeyaa iyadoo la codsiyada of volts dhammaan ka. Haddii voltages waxyaalahan waxaa loo dareensanaa ka dhanka kale, tareenka loo arko inay ku jiraan xaalad shaqeeya. Inkasta oo baaritaanka ma aha had iyo jeer muhiim ah on loox oo keliya hal ama laba lakab, waxa uu weli talinayaa haddii aad dhab ah oo ku saabsan tayada.
Vias isku xidha layers gudaha iyo kuwa dibadda loo yaqaan vias indha la '. Magaca waa natiijada ka xaqiiqda ah in, sababtoo ah vias sida kaliya oo lagu arkay karaa hal dhinac. Vias isku xidha laba ama in ka badan layers hoose waxaa loo yaqaan vias lagu aasay, taas oo aan la arkay karaa meel ka baxsan ee labada dhinac. On loox ay ku jiraan vias indha la 'oo lagu aasay, via buux waxaa badanaa loo isticmaalaa. Tani waxay ku hayaa dusha ka baxsan xasillooni badan oo ka caawisaa suurtagalnimada ee Alxan dhexdeeda Godoo kale oo cabaar ah vias gudaha hoose.
Xulashada Waxyaabaha Qiimaha Saameeya
PCB caadi kharash badan marka ay ka kooban tahay qaababka sida tabs dahab, vias indha la 'ama lagu aasay, ama via buuxintii. Sidoo kale, PCB la line / dheereynta width hoos 6 mils sidoo kale waxay noqonaysaa inay ku kici dheeraad ah. Sababta Waayo, kuwaas oo qiimaha sare waa habka kale ah in uu galay wax soo saarka ee loox PCB aan caadi ahayn. Waxaa saas la mid, soosaarid PCB qaarkood soo baxayso in aan ku dhawaad ​​sida faa'iido ama guul marka mils yar ama vias hoose waxaa lagu ciyaaray, iyo qiimaha sare ayaa lagu wadaa in lagu iibin doono khasaaraha. Fabricators jira PCB in wax soo saarka la line / cabirka width ugu hooseeya ee 3 mils, laakiin tani badanaa laguma taliyo haddii ay tahay doorasho kaliya aad u qayb gaar ah.
Power iyo Heat Saameynta PCB Waxyaabaha Xulashada
Out of arrimood oo dhan in PCBs saamaynta, labo ka mid ah kuwa ugu xoogan ee jira xoog iyo kulaylka. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah si loo ogaado fayaaradihiisii ​​kasta, oo waxaa la samayn karaa by qiimaynta conductivity kaamerada ah ee PCB ah. Waxa uu qeexayaa sida xoogga ereeya waxaa beddelay heerkulka iyada oo dhererka mid ah waxyaabaha la. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan aasaasay qiimaha warshadaha oo dhan, waayo, conductivity kaamerada.
Tusaale ahaan, Rogers Corp. xanbaarsan wax PCB ah, RT / duroid 5880, in waxaa inta badan laga codsadaa in EW iyo isgaarsiinta. joogto ah ayaa dielectric ee wax this waa yar yahay, sida waa wax kooban oo ay ku jiraan xubno ka galaas micro-buunshada ku. microfibers adeegaan ujeedada kor xoogga fiber ee wax.
Sababo la this joogto dielectric hooseeyo, PCB waa fiican ee codsiyada in ka faa'iidaysan firikuwensiyada sare. Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u tahay conductivity kaamerada yar yahay wax, waxaa si fudud loo kululeeyo karo, kaas oo noqon kara khasaare weyn ee codsiyada kulaylka-degdeg ah.
PCB Qalabka iyo Codsiyada Industry
Codsiyada in ciidamada iyo aerospace ah, gaari iyo caafimaad warshadaha, PCBs yihiin macmalay ee kala duwan double-dhinac keli ah iyo sidoo kale, qaar ka mid ah kuwaas oo copper u guntaday iyo kuwa kale in ay isticmaalaan aluminium. In kasta oo warshadaha kuwaas, waxyaabaha loo isticmaalo qaab ugu badan ee meelaha gaar ah. Sida oo kale, qalabka PCB lagu doorto tayadooda khafiifa ee warshadaha gaar ah ama ay awooda in ay la tacaalaan xaddiyo sare oo awood kale. Sida oo kale, marka u jajabnaanta waxqabadka xisaabta lagu daro, waxaa muhiim ah si loo ogaado taas oo hawlaha u baahan in la la mid kale marka xulashada qalabka PCB marka la barbar dhigo, tan iyo heerarka wax qraallo in heerarka fulin.
Hayalka san iyo adag-hayalka san Guddiyada
Sanadihii la soo dhaafay, loox hayalka san iyo adag-hayalka san ayaa koray caan sababtoo ah fursadaha ay u oggolaan waayo, noocyo kala duwan oo isticmaalka. Asal ahaan, waxay la wada xodan kara, duubnaadaan oo xitaa ku duudduubtay oo ku wareegsan waxyaabaha, si ay loo isticmaali karaa si ay u gaaraan codsiyada in ay suurto gal marnaba noqon lahaa looxyo circuit guri. Tusaale ahaan, guddi hayalka san laga yaabaa in loo isticmaalo goosin ka mid ah qalabka u baahan doono guddi si laab xagal oo weli dhammaan ka qaadaan hadda si kale oo aan baahida loo qabo isku xirta darfahoodii.
Inta badan loox hayalka san suuqa ka kooban yihiin Kapton, film polyimide ah in uu ahaa asalkiisu ka soo jeedo by Corporation Dupont ah. Filimku wuxuu ku faanaa tayada sida iska caabin ah kulaylka, cufka waji leh oo joogto ah dielectric ee kaliya 3.6.
Kapton imanaya saddex qeybood oo Pyralux:
• retardant Abuulahab, (FR)
• retardant Non-olol (NFR)
• waxqabadka sare / koollo-yar (AP)
Xulashada PCB Board Qalabka - First Quality
Marka ay timaado in xulashada qalabka guddiga PCB, oo tayo leh waa tan ugu muhimsan ee dhismaha nooc kasta oo guddiga, haddii waxa uu loogu talagalay qalabka korontada gurigaaga ama qalabka warshadaha. qayb A oo ka kooban guddiga circuit daabacay noqon kartaa waaweyn ama yar yar, raqiis ah ama qaali, laakiin waxa muhiim ugu waa in wax la is waydiinayo waxay bixisaa qaab ka xoogbadan, mudada buuxda ee ay cimri filayaa.
Inkasta oo ay jiraan dhawr nooc oo ah qalabka PCB in tagaan guddiga la siiyo, isku halaynta wax soo saarka ugu dambeyntii waa maxay adeegatada iyo shirkadaha ayaa raadinaya in alaabooyinka ay isticmaalaan loox circuit. Dabcan, waxa kale oo muhiim ah in qalabka guddiga PCB waa xoog ku filan si ay u wada qabtaan, xataa haddii qayb filaan ah uu hoos u dhacay ama reebtay dhinac.
On qalab computer, tusaale ahaan, PCBs waara loo hubiyo updates hardware waxaa la samayn karaa iyada oo aan sameynayo dhaawac in qalabka pre-jira guddiga PCB. Isla sidaas u dhaqmaan qalabka korantada, microwaves iyo qalabka kale ee guriga ku tiirsan technology PCB inuu sii joogo xaaladda shaqada. Xataa goobaha dadweynaha elektaroonik ah sida ATM, PCBs waa inay u shaqeeyaan si shakila'aan badhamada shaqayn doonaan iyo amarrada loo fahmi doonaa dib u dhac la'aan.
At PCB Wonderful, aan bixino kala duwan oo ay ka buuxaan sahay PCB iyo adeegyada shirka. Madaama aannu ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ganacsi iyo farsamooyinka cusub, PCB Wonderful awood u taabato qalab laminate kala duwan iyo qalabka ay ka mid yihiin substrate FR4, Rogers iwm in ay yihiin kuwa ugu caansan oo si weyn loo dalbadaa. Adeegyada Our ayaa la isticmaalay by injineerada dhamaan qaybaha warshadaha, oo leh ujeeddooyin gaar ah marka ay timaado ka shaqaynta iyo ka shaqeynayaan of qaybaha isticmaala PCB. Si aad wax badan oo ku saabsan adeegyada naga bartaan, booqo guudmar shirka iyo pages awoodaha ama nala soo xiriir si quote ah dagdag ah maanta.